Tag: email yekutevera | Martech Zone
Tag: email yekutevera
Chitatu, Nyamavhuvhu 17, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 John-Henry Scherck
Kutengesa, seindasitiri, kuri kukurumidza kuchinja. Vatengesi zvikwata vagara vachikwanisa kuita kuwedzera kwekuwedzera kwemaitiro mukuita kwavo, asi mumakore mashoma apfuura, kutengesa kwapinda munguva nyowani inowedzerwa nehunyanzvi, kuongororwa uye neshanduko inoshamisa mukuita kwevatengi. Vatengesi vekutengesa vaisa tarisiro nyowani pakushandisa tekinoroji kuyera kutengesa rep chiitiko uye kugadzirisa mashandiro kuburikidza nehuwandu hwekuongorora uye kuyedza nematekisheni uye zano. Kana iwe uchienzanisa a
Muvhuro, March 10, 2014 Muvhuro, March 10, 2014 Douglas Karr
Pandichangobva kunyora nezve zvakapfuura, zviripo uye ramangwana rekushambadzira, imwe nzvimbo yekutarisisa yaive yekushambadzira michina. Ndakataura nezvekuti indasitiri iyi yakakamurwa sei zvechokwadi. Kune mhinduro dzakaderera-kumagumo dzinoda kuti iwe uenzanise maitiro avo kuti ubudirire. Izvi hazvidhure… mazhinji anodhura zviuru zvemadhora pamwedzi uye zvinoda kuti iwe udzore mashandiro anoita kambani yako kuenderana nemaitiro avo. Ini ndinotenda izvi zvinoreva njodzi kune vakawanda